Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated-IPPP ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated-IPPP စက်ရုံ
၁။ ပြောရလျှင် IPPP၊ Triaryl ဖော့စဖိတ်များ Iospropylated၊ ပွင့်လင်းသောအရည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆွဲငင်အား (၂၀ / ၂၀ ℃): ၁.၁၆၆-၁.၁၈၅ အက်စစ်တန်ဖိုး (mgKOH / g): ၀.၁ max အရောင်ညွှန်းကိန်း (APHA Pt-Co): ၈၀ max Viscosity @ 25 ℃, cps: 50-64 Phosphorus ပါဝင်မှု - 8.3% min 6. IPPP50 ကုန်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုခြင်း - PVC, polyethylene, မီးလျှံတားဆီးရန်အတွက်အကြံပြုသည်။
TROPHENYL PHOSPHATE ISOPROPYLATED ၁ .Synonyms: IPPP, Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 65, Triaryl ဖော့စဖိတ် ၂။ မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၃၈၂.၇ ၃။ NO NO .: 68937-41-7 4． Formula: C27H33O4P 5．IPPPPPPP Specifications အရောင်မရှိသို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းသောအရည်အထူးသတ်မှတ်ထားသောဆွဲငင်အား (20/20 ℃): 1.15-1.19 အက်ဆစ်တန်ဖိုး (mgKOH / g): 0.1 max အရောင်အညွှန်းကိန်း (APHA Pt-Co): အမြင့်ဆုံး 80 Refractive Index: 1.550-1.556 Viscosity @ 25 ℃, cps: ၆၄-၇၅ ဖော့စဖောရက်ပါဝင်မှု% - ၈.၁ မိနစ်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်း။
IPPP35 အမှတ်အသားကုန်ပစ္စည်းအမည်: Triaryl isopropylated phosphate CAS အမှတ် - ၆၈၉၃၇-၄၁ - ၇၇ REACH မှတ်ပုံတင်နံပါတ် - သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Zhangjiagang မြို့တွင်တည်ရှိပြီး phosphorus esters ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ includeIPPP35), Diethyl Methyl Toluene Diamine နှင့် Ethyl Silikat ။ ကျွမ်၊ ရှန်ဒေါင်း၊ Hebei & Guangdong ပြည်နယ်များတွင် OEM စက်ရုံလေးခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်ရုံပြသမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု ...